MakeOwn.App - iOS နှင့် Android အတွက် Mobile App Builder
ဘာသာပြန်ပြီး အခမဲ့အက်ပ်ကို ရယူပါ။
Website Builder မိုဘိုင်း App Builder
မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှမရှိဘဲ iOS နှင့် Android!
MakeOwn.App သည်အကောင်းစား DIY mobile app builder တစ်ခုဖြစ်သည်။ BuildFire ၏ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် AWS ဆာဗာများတွင်လက်ခံထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ app building platform သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုကူညီပေးသည်
ကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းမရေးဘဲအောင်မြင်သော app များကိုထုတ်ဝေပါ။
ရက် ၃၀ စမ်းသပ်မှုစတင်ပါ
Credit Card မလိုအပ်ပါ
မိုဘိုင်း App Builder
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုအစကနေတည်ဆောက်ခြင်း (သို့) ပုံစံခွက်တစ်ခုထဲကိုစိတ်ကြိုက်ဆွဲခြင်းဖြင့်သင်၏လမ်းကိုဆွဲချလိုက်ပါ။
အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများနှင့် Shopify
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်း၌ e-Commerce အင်္ဂါရပ်များကိုဖွင့ ်၍ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုငွေရှာခြင်း (သို့) ထုတ်ကုန်များရောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါ။
သင်၏အက်ပ်များကို Apple's App Store နှင့် Google Play Store သို့ထုတ်ဝေရန်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ DIY mobile app builder သည်မည်သည့်ကုဒ်မှမရေးဘဲသင်၏ app ၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုလွယ်ကူစွာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Dynamic Push အသိပေးချက်များ
plugins များဖြင့်သင်၏ app ထဲသို့အစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလွယ်ကူစွာထည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Feature Marketplace သည်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်း၏လိုအပ်ချက်အများစုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သည်။
အလွန်စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင် plugin ကိုသင်တိုးတက်စေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ငါတို့အတွက်၎င်းကိုသင်တိုးတက်စေပါစေ။
App တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် All-In-One Solution
သင်၏ ၀ က်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များကိုအက်ပ်များသို့ပြောင်းပါ
သင်၏ App ကိုမည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆိုဘာသာပြန်ပါ
Google နှင့် Facebook ကြော်ငြာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
အခမဲ့ Pre-Built Template များနှင့် Stock Photos များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ App နည်းပညာပါတနာသည် BuildFire ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon ၏ဆာဗာများတွင်အက်ပ်များကိုလက်ခံသည်
သင်၏ App ကို Zapier နှင့် Segment ဖြင့်အဆင့်မြှင့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ mobile app builder မှပြုလုပ်သော app အချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရက် ၃၀ အခမဲ့စမ်းနိုင်သည်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုအပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုစာရင်းသွင်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်
သင်၌ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းရန်လည်းအာမခံချက်ရှိလိမ့်မည်။
နှစ်ပတ်လည် 50% OFF
အမေရိကန်ဒေါ်လာ GPB အီးယူအာရ်
သင်၏ကိုယ်ပိုင် app ကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်သင်လိုအပ်သမျှ
₤ ၁၃၉.၉၉/ mo
Save: $ 324
Android နှင့် iOS Apps များ
အခမဲ့ App တင်သွင်းခြင်း။
သင်၏ app ကိုပိုမိုစွမ်းအားနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်မြှင့်တင်ပါ။
Save: $ 684
ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးနှင့်သင်၏စီးပွားရေး app ကိုမြှင့်တင်ပါ။
Save: $ 2124
ဒါမှမဟုတ် Pet Rescue Group လား။
တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများကိုလုံးဝအခမဲ့ app များတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
သင်ဟာကိုယ်စားလှယ် (သို့) ပြန်လည်ရောင်းချသူဖြစ်ပါသလား။
ဒါမှမဟုတ် app များစွာရှိသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူမိတ်ဖက်အစီအစဉ်သို့စာရင်းသွင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်တစ်သက်တာလျှော့စျေးများရယူပါ။
အလည်အပတ် Reseller များ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
သင့်မှာမေးခွန်းရှိပါသလား။ အဖြေများကိုရှာပါ Knowledge Base ဒါမှမဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု အကူအညီစင်တာ.
နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်း app တိုးတက်မှုနည်းဗျူဟာများ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့်မွမ်းမံမှုများကိုရယူပါ။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Apple ၏ Product Page Optimization (PPO) သည် app developer များနှင့် marketers များအတွက် မကြာသေးမီက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ App Store တွင် သန်းနှင့်ချီသော အက်ပ်များကို ရနိုင်သဖြင့် ၎င်းကို သတိပြုမိရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက် သာလွန်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ […]
ဇြန္လ 8, 2022
မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းများ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို အစားထိုးနည်း
မိုဘိုင်းဂိမ်းများ၏ သဘောသဘာဝသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကာ Facebook ၏ မကြာသေးမီက Meta သို့ နာမည်ပြောင်းခြင်းသည် အဆိုပါဂိမ်းများ၏ အနာဂတ်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ Facebook သည် မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းများကို ပထမနေရာမှ လူကြိုက်များလာစေရန် ကူညီပေးရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး 3D နှင့် virtual ကို အလေးပေးသည့်အရာများအတွက် မျှော်မှန်းချက်များ […]
အက်ပ်အတွင်း ၀င်ငွေအတွက် ဆုချီးမြှင့်သော ဗီဒီယိုများ ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း 11 ခု
သင့်အက်ပ်နှင့် သုံးစွဲသူများ တသမတ်တည်း ထိတွေ့ဆက်ဆံစေပြီး ထိန်းသိမ်းမှုကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေပါက၊ ဆုချီးမြှင့်ခံရသော ဗီဒီယိုကြော်ငြာများသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဗီဒီယိုတိုတိုကြော်ငြာကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ဆုပေးထားသော ဗီဒီယိုများသည် အသုံးပြုသူများအား အက်ပ်အတွင်းဆုလာဘ်အချို့ကို ရရှိစေပါသည်။ ဆုကြေးအမျိုးအစားများနှင့် […]
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ-
သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ · ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ · စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံ
© 2022 3DMA Ltd မှ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် cookies များကိုသင်၏အကြိုက်များအားသတိရခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်ခြင်းဖြင့်မင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးပါ။ “ အားလုံးလက်ခံရန်” ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကွတ်ကီးအားလုံးသုံးရန်သင်သဘောတူသည်။